FERROALLOY Fekitori, Vatengesi - China FERROALLOY Vagadziri
Carburizers (Vanomesa Carbon)
Carburizer, inozivikanwa se carburizing mumiririri kana carburant, inowedzera mukugadzira simbi kana kukanda kuti iwedzere kabhoni zvemukati. Carburizers anoshandiswa kuchenesa simbi Carburizers uye kukanda simbi Carburizers, pamwe nezvimwe zvinowedzera kuCarburizers, senge mabhureki epad ekuwedzera, sekukwesana materia
Silicon manganese alloy (SiMn) inoumbwa nesilicon, manganese, iron, kabhoni shoma uye zvimwe zvinhu. Mhedzisiro yekuwedzera kwesilicomanganese kune simbi: Ose silicon uye manganese ane pesvedzero yakakosha pazvinhu zvesimbi.
Ferro silicon barium inoculant imhando yeFeSi-based alloy ine huwandu hwakawanda hwebharamu necalcium, inogona kudzikisira zvinoshamisa chill phenomenon, ichigadzira masara mashoma. Naizvozvo, Ferro silicon barium inoculant inoshanda zvakanyanya kupfuura iyo inoculant iyo inongova necalcium, mune kushambadza
Nodulizer inodhakwa iyo inogona kusimudzira kuumbwa kwe spheroidal graphite kubva kumacrafite graphite mune ekugadzira maitiro. Inogona kukurudzira spheroidal graphites uye kuwedzera huwandu hwe spheroidal graphites kuitira kuti yavo mega zvivakwa zviri nani. Nekuda kweizvozvo, iyo ductility uye kuomarara
Ferro silicon strontium nucleating mumiriri mhando yeFeSi-based alloy ine huwandu hwakawanda hwe barium uye calcium, inogona kudzikisira zvinoshamisa chill phenomenon, ichigadzira mashoma mashoma masara. Naizvozvo, Ferro silicon barium inoculant inoshanda zvakanyanya kupfuura iyo inoculant inongova necalc chete
Silicon Calcium Deoxidizer inoumbwa nezvinhu zveesilicon, calcium nesimbi, inzvimbo yakanaka deoxidizer, desulfurization mumiriri. Inoshandiswa zvakanyanya musimbi yemhando yepamusoro, yakaderera kabhoni simbi, isina kugadzirwa simbi uye nickel base alloy, titanium chiwanikwa uye imwe yakakosha chiwanikwa kugadzirwa.
Ferro silicon magnesium Nodulizer iri kudzikisira alloy kuumbika kweasingawanzo pasi, magnesium, silicon uye calcium. Ferro silicon magnesium nodulizer ndeye yakanakisa nodulizer ine simba rekuita deoxidation uye desulfurization. Ferrosilicon, Ce + La mish simbi kana isingawanzo pasi ferrosilicon uye magnesium vari
Ferrosilicon rudzi rwe ferroalloy iyo inogadzirwa inogadzirwa nekuderedza kwesilika kana jecha necoke pamberi pesimbi. Chaizvoizvo sosi simbi ndeye simbi yakasara kana millscale. Ferrosilicons ine silicon yemukati inosvika ingangoita gumi muzana (15%) inogadzirwa mumhepo inoputika yakarongedzwa neacid fire zvidhina.
Ferromanganese imhando ye ferroalloy iyo inoumbwa nesimbi uye manganese.is inogadzirwa nekupisa musanganiswa weiyo oxides MnO2 uye Fe2O3, ine kabhoni, kazhinji kunge marasha uye coke, mune chero bhomba remoto kana yemagetsi arc turu-mhando system, inodaidzwa kuti yakanyura arc vira.
Ferrochrome (FeCr) chiwanikwa chechromium nedare rine pakati pe50% uye 70% chromium. Pamusoro pe80% yenyika ferrochrome inoshandiswa mukugadzira simbi isina chinhu. Zvinoenderana nekabhoni zvemukati, inogona kukamurwa kuita: Yakakwira kabhoni ferrochrome / HCFeCr (C: 4% -8%), Medium kabhoni ferrochrome / MCFeCr (C: 1% -4%), Yakadzika kabhoni ferrochrome / LCFeCr (C: 0.25 % -0.5%), Micro kabhoni ferrochrome / MCFeCr: (C: 0.03-0.15%) .China yekuwedzera chikamu chekugadzirwa kwepasi peerrochrome.
Ferromolybdenum is a ferroalloy inoumbwa nemolybdenum nesimbi, kazhinji iine molybdenum 50 ~ 60%, inoshandiswa sechiwanikwa chiwanikwa mukugadzira simbi.Ikushandisa kwayo kukuru kuri mukugadzira simbi senge molybdenum element inowedzera.Iyo yekuwedzera molybdenum musimbi inogona kuita kuti simbi ive neunifomu. yakanaka sekristaro